Daawo:-Maamulka Khaatumo oo maanta Ciidamadii ugu badnaa ku wareejiyey Maamulka Somaliland iyo Sababta-Video+Warbixin | | Horufadhi Online
Daawo:-Maamulka Khaatumo oo maanta Ciidamadii ugu badnaa ku wareejiyey Maamulka Somaliland iyo Sababta-Video+Warbixin
Magaalada Balicad ee Gobalka cayn waxaa maanta ciidankii ugu badnaa xubno ka socda Maamulka Khaatumo ku warejiyeen Maamulka Somaliland sida ay sheegeen Ciidankii ugu badnaa oo gaadhay tiradda 200 oo askari kuwaas oo ku sugnaa Deegaanka Balicad. .
Munaasibadda Ciidanka loogu wareejinayey waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan Maamulka Khaatumo oo ay kamid ahaayeen,Wasiirka amniga Maamulka Khaatumo Keyse Cabdi Yusuf,Wasiirka Warfaafinta Khaatumo Axmed Xaaji i Cali iyo Wasiirka ku xigeenka Maaliyadda Maamulka Khaatumo Maxamed Cali Bashiir,waxaana ay sheegeen in wareejinta Ciidankan ay tahay fulinta heshiiskii Kgaatumo iyo Somaliland,qaar kamid ah,balse waxaa su,aashu tahay Somaliland maxay ka fulisey Heshiiska Cali Khaliif dhankooda?
Short URL: http://horufadhimedia.com/?p=57199
4 Comments for “Daawo:-Maamulka Khaatumo oo maanta Ciidamadii ugu badnaa ku wareejiyey Maamulka Somaliland iyo Sababta-Video+Warbixin”
February 13, 2018 - 9:02 pm
Waar wax Khaatumo la yiraahdaa ma jiraan. Kooxdii Galayr waxa ay hore isugu dhiibeen SNM, kooxdii kalena SSDF. Arrintanina ma cusba, oo waa tii Keyse waa hore xoogaagiisii ku wareejiyay SNM. Su’aashuse waxa weeye maxaa hadda keenay in wax CUSUB laga dhigo ciidan waa hore Keyse ku wareejiyay SNM oo uu waliba shaashadaha laga wada daawaday? Jwbtu waa fududahay, , waxaa la xansaday in ay sidii kuwii CARRO-WEYN kamid noqonayaan ciidanka Federaalka ee qoristiisu sida xawliga ah uga socoto deegaamada SSC. Ciidankaas oo loo diyaarinayo maamul goboleedka CUSUB ee federaalka xubinta ka mid noqondoona ee reer ssc. Maamulkaas oo lagu unki doono shirka bisha afraad i.a. Waayo waxaa go’aan lagu gaaray in marka hore ciidan federaalku u dhiso maamulka cusub, deedna maamulka la dhiso.
Waa inoo ciidanka Federaalka ee maamulka cusub ee hawshiisu sida xawliga ah u socoto iyo shirka bisha afraad i.a.
Maamulka Khaatumo, yaan loo gefin. Wasiir Keyse, wuu ka sii hor dhacay, yacnii raqba-diisa uun, waa qadimaaye. Waxa hubaal ah, inaan wali la gaadhin, ciidan isku darsi. Waayo, wax badan, baa ka horeeya. Ugu horeyn, waa in shacabku is aamino, wixii ku kala maqnaa, la dhameeyo. Ileyn dadku ma waalae.
Kal hore, isagoo Buhodle joogga, ayuu Keyse Caddeeyey in la midaynayo ciidamada, markii shacabkii Khatumo dareen ka muujiyeen/ka shakiyeen warkii Keyse, iclaamka ka yidhi. Wasiirkii warfaafinta iyo xildhibaano, baa dadkii loo soo diray, oo naqdiyey, laakiin maanta ayuu ka rumeeyey riyadiisii, Keyse.
Wasiirkii amniga Khatumo, waa inuu si degdega u saxaa, ku milmida, aan waqtigeedii la gaadhin. Waxa laga yeeli lahaa Keyse maanta, ciidanku, waa ciidan Khatumo, haddii wax la isku darsado, hadhaw ha la qarameeyo. WBT
Ma xuma in ciidanka la isku daro oo meeshaas dhan u dhacdo oo Shacabka walaaloobo waa mid loo baahanyahay , haseyeeshee arintan daacad kama aha Jeegaantu , waa xayaysiis iyo been waxan mediaha lasoo dhigay waa dhuxul dambas huwan kii run moodayoow ha ku joogsan waad ku guban.